We Fight We Win. -- " More than Media ": မီး ပြသနာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အဖြေရှာ ( ခိုင်အောင် ကျော်)
မီး ပြသနာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အဖြေရှာ ( ခိုင်အောင် ကျော်)
အစိုးရကတော့ တုပ်တုပ်မျှမလှုပ်သေးဘူးပေါ့ ။ တခါက လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇေါ်မင်းက ပြောသွားတာရှိတယ် ။ လျှပ်စစ်တွေကို ပိုလျှံလို့နိုင်ငံခြားတွေကို ရောင်းစားနေရသေးတယ်တဲ့။ ကဲ - ဒီလိုဆိုရင် ရောင်စားနေရတယ်ဆိုတဲ့သူတွေရဲ့ နိုင်ငံကလူထုလူတန်းစားတွေ ဘာကြောင့်များ လျှပ်စစ်ကို -၂၄-နာရီတိတိ ပေးပါလို့လမ်းမပေါ်ထွက် တောင်းဆိုနေရတာလဲ ။ ပြသနာတွေဟာ ဒီကစနေတာဖြစ်တယ် ။ အစိုးရကတော့ သူတို့ မှ လုံလောက်တာ မပြောနဲ့ပိုတောင်လျှံနေတယ်လို့ပြောဆိုပြီးသားဖြစ်တယ် ။ ညူကလီးယား စက်ရုံ ထုတ်လုပ်ဖို့စက်ရုံကြီးတွေ ဆောက်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံ ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တွေ - ဂါစ်တွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံမှာ အခုလို ပြည်သူတွေက ဘာကြောင့်များ မီးကို -၂၄-နာရီ ထွန်းလင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေရတာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်လာနေပြီ ။
တရုပ်နိုင်ငံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ-အိန္ဒိယနိုင်ငံ- တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွေ နောက်ဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံတွေကို ဆက်လက်ပြီးတော့ ရောင်းချကြမဲ့စီမံကိန်းတွေက အကျိုးအမြတ်တွေကို ပြည်သူလူထုတွေက ဘာမှ မခံစားရပေဘူးလား ။ နေပြည်တော်သာ မီးလင်းပြီး သူတို့ သာ တိုက်ကြီးကြီးနဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာ ခံစားနေရမှာလား ။ ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထုတွေဟာ သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်စွာနဲ့ချီတက်လာခဲ့ ကြပြီ ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့လက္ခဏာတွေကို တချိန်လုံးကြေပွန်အောင် ထမ်းရွက်ခဲ့ တဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသူများကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း ၊ အရေးယူခြင်း ၊ ပစ်သတ်ခြင်း များ မပြုလုပ်မိဖို့ လိုတယ် ။ ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ အရိပ်အယောင်ကို သတိထားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ကြရတော့မဲ့ အချိန်ဖြစ်နေတယ် ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်တွေထဲမှာ လမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်မဲ့ ပြည်သူလုထုကို ဘယ်တော့မှ ပန်းနဲ့ ပေါက်ပြီး မကစားခဲ့ ဘူးဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သက်သေ ပြစရာတွေ တပုံကြီး ရှိနေတယ် ။
The living standard of the country is going down deeper and deeper with great acceleration and momentum due to the IMPACT OF 50 YEARS MISTAKES OF WRONG POLITICAL SYSTEM and WRONG ECONOMIC SYSTEM SET UP BY JUNTA,NE WIN and FOLLOWED UP BY HIS NEW GENERATION OF MILITARY GANGSTERS.(NOT UNDER the ROOF of DEMOCRACY)
the NAY PYI DAW is fully lighted up
(Please translate to Burmese and highlight to citizens.)
ပြည်သူတွေကို ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပါတီကြီးက ဒီမိုကရေစီ အရင်မယူဘဲ မီးအရင်လာပါစေလို့ ပြောတဲ့အတွက် စိတ်ဆိုးနေလေရဲ့။ လွတ်တော်အမတ်အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်း သီချင်း တိုက်နေလေရဲ့။ လူနာတွေကိုကြည့်နေတဲ့ မဖြူဖြူသင်း လည်း သွားတဖြဲဖြဲ နဲ့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံနေလေရဲ့။ အင်း....ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးလည်း ဘယ်တော့မှ့ ........